नाटक : दाना - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : मसानको एक टुक्रा हाड
कविता : फूलमाया →
नाटक : दाना
कती पटक पढियो : 63
स्थान – अस्पताल परिसर र अन्य ।
पात्र – दाना, चौला, प्रशासक र अन्य
निम्न वर्गीय आदिवासी एवम् मध्यम कदको शारीरिक बनावट भएको दाना माझी मानिस आफ्नी टीबी रोगद्वाराग्रस्त बिरामी श्रीमती आमाङ्गलाई लिएर ६० किलोमिटर टाढादेखि हतार हतार जिल्ला अस्पतालमा आइपुग्छन् । त्यतिखेरसम्म श्रीमतीको अवस्था सामान्य सामान्य नै हुन्छ । मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीहरू अस्पतालले केही राहत देला कि भन्ने मनसाय लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरूका साथमा छोरी चौला पनि हुन्छिन् । डाक्टरले सामान्य चेकजाँच गरेर अर्को कोठामा जाने सल्लाह दिन्छन् । उनी पनि त्यसै गर्छन् । उपचारकै क्रममा बिरामीको रातको समयमा मृत्यु हुन्छ । त्यसपछि अस्पतालले तुरुन्त अमाङ्गको लासलाई त्यहाँबाट निकाल्न आदेश दिन्छ ।
दाना आफ्नी श्रीमती अमाङ्गको लास काँधमा बोकेर सडकमा निस्किएका छन् । उनको पछि पछि लागिन् उनकी छोरी चौला माझी । चर्को घाम लागेको छ । सडक भतभती पोल्ने तातो छ । उखर्माउलो गर्मी छ । उनी कहिले त्यो शव बिसाउँछन् र केहीबेर थकाइ मारेर फेरि बोकेर हिँड्छन् । साथमा छोरी आँखाबाट आँसु झार्दै आफ्नी आमाको शव र बुबाको त्यो बेहाल अवस्था देखेर निकै निराश, थकित र गलित अवस्थामा पछि पछि हिंडिरहेकी छन् । सडकमा मानिसहरू रमिते बनेका छन् । मानौँ कि त्यहाँ केही भएकै छैन ।
समय – मध्यान्ह ।
स्थान – सडक छेउ ।
पात्र – दाना, चौला
सडकमा मोटरहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् । मानिसलाई आ–आफ्नै सुरमा छन् । कसलाई के थाहा कि सडकमा एउटा भयनाक घटना घटिरहेको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक भनिने देशका एक नागरिक यसरी आफ्ना परिवारको प्रियजनका लासलाई बोक्न बाध्य छन् । शासकको असली अनुहार र सीमान्तकृत जनताको हविगत सडकमा छताछुल्ल भएको छ ।
एक त आफन्तको लास, अर्को भोको र अनिंदो शरीरको जीवन्त कथा संसारमा नयाँ ढङ्गले लेखिँदैछ । मृतक श्रीमतीको लास बोकेर १२ किलोमिटर टाढा हिंडेर पुग्नु जिउँदो साहसी र स्वाभिमानी श्रीमान दाना अनि उनकी १२ वर्षीय छोरी चौलाको यथार्थ जीवन तातो सडकमा घिस्रिरहेको छ ।
दाना सडकमा आफ्नो काँधमाथि कपडाले बेरिएको लासको भारी बोकेर छोरीसँगै कष्टपूर्वक सडकमा दौडिरहेका छन् । उनी निकै टाढाको गन्तव्यमा पुग्न हतारिएर हिडिरहेका छन् । चर्को घामका कारण बाबु छोरी दुवैको अनुहार पसिनै–पसिनाले निथ्रुक्क भिजेकोे छ । बुबाको काधँमाथिकोे भारी देखेर रुमालै मुख छोपेर रुँदै गरेकी छोरी चौलाको त्यो हृदयविदारक दृश्य हेर्न संसार विवश छ । दाना लासलाई एकछिन सडकको छेउमा बिसाउँछन् ।
दाना – (पसिना पुछ्दै) ओहो ! कहिले यो बाटो काट्ने हो कुन्नि ? छोरी आऊ यहाँ बस ।
चौला – (बुबाले सङ्केत गरेको ठाउँनेर बस्दै) अस्पतालले एम्बुलेन्स नदिएर त हो नि बाबा । उसले एम्बुलेन्स नदिएर त यस्तो दुःख आइलागेको हो नि । आखिर उनीहरू राक्षस नै रहेछन् ।
दाना – (आफूलाई सम्हाल्दै) हो नि ।
चौला – अँ बाबा ।
दाना – थाहा छोरी हामी कति टाढाबाट आएका थियौँ ?
चौला – थाहा छ, हाम्रो घरबाट पूरै ६० किलोमिटर ।
दाना – ओहो ! ६० किलोमिटर पो छ त ? बिरामी बोके जस्तो कहाँ हुने रहेछ र ?
चौला – जाऔँ बुबा ।
दाना – हुन्छ ।
चौला – (सम्झेजस्तो गरेर) अँ बुबा, ममीले अन्तिम बेला केही भन्नुभएको थियो ?
दाना – (अलि सतर्क हुँदै) छोरी चौलाको विशेष ख्याल गर्नू है भनेकी थिइन् ।
चौला – ममीले मलाई कत्ति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । होस् यो कुरा, जाऔँ …
दाना मृतक श्रीमतीको लासलाई उठाएर काँधमा राख्न खोज्छन् तर सक्तैनन् । अनि एकछिन भुइँमै राख्छन् । फेरि श्रीमतीलाई दाहिने काँधमा बोकी उनी छोरीको अघि अघि लाग्छन् । पछाडि छोरी सानो आवाजले रुँदै हिँड्दै हुन्छिन् । दानाले बिचबाटोमा आइपुगेपछि काँध फेर्न सडकको छेउमा श्रीमतीको लासलाई बिसाउँछन् । सँगै चौलाले डाँको छोडेर रुन थाल्छिन् । त्यतिखेर टन्टलापुर घामका कारण कोही मान्छेहरू सडकमा आवत जावत गरेका छैनन् । सडकमा हिंडिरहेकाहरू पनि आफ्नै सुरमा छन् ।
जसोतसो छोरीको रुवाइसँगै दानाले १२ किलोमिटरको यात्रा असिना पसिनाका साथ पुरा गर्छन् । उनी सडकको छेउमा एकछिन सुस्ताए । अनि एकछिन् अतीततिर बिलाए ः
दाना – अमाङ्ग, अमाङ्ग । कहाँ हो ?
अमाङ्ग – किन कराको ? कतिखेर आउनुभयो ?
दाना – भर्खरै । चौला खोइ ?
अमाङ्ग – यतै कतै होली । एकछिनअघि त यतै थी ।
दाना – साँझ परिसक्यो । जमाना खाराब भनेको थाहा छैन । सहरमा कस्ता कस्ता घटना भइरहेका छन् । छोरीचेलीलाई जोगाउनै गा¥हो भइसक्यो । सारा हिन्दूस्तान आज बदनाम भएको छ ।
अमाङ्ग – अलि अलि त मलाई पनि थाहा छ ।
चौला आइपुग्छिन् । हातमा कापी र किताब हुन्छ । चौला फरासिली र सुन्दर छिन् । उनी साथीहरूका प्रिय पनि छिन् । कसैसित डराउँदिनन् । हक्की स्वभावकी चौला गा¥हो सा¥हो पर्दा साथीहरू सम्झिहाल्छन् ।
चौला – बाबा कतिखेर आइपुग्नु भयो ? आज त अलि चाँडै नै आउनुभयो नि !
दाना – (हाँस्दै) हो आज अलिकति चाँडै नै आएको नि तिमीहरूको मायाले । आज म काम गनै ठाउँ नजिकै रेपकेस जस्तो नराम्रो घटना घट्यो । मलाई त काम गर्न नै मन लागेन । आजकल हिन्दुस्तानको वातावरण बिग्रिएको छ । कतिखेर के हुन्छ, भन्न नै सकिँदैन । छोडिदिऊँ यो कुरा … ।
चौला – (ममीतिर देखाउँदै) ममी ममी बिहान बाबाले के भनेर जानुभएको थियो रे !
अमाङ्ग – खै मैलाई त थाहा भएन ।
चौला – लौ हेर ढाँटेको । ममी र ड्याडी मिलेर मलाई उल्लु बनाउन खोजेको होला । मलाई थाहा छ ।
दाना – अमाङ्गतिर देखाउँदै साँच्चि के रे । मैले पनि बिर्सेँ ।
अमाङ्ग – के हो ? भनेको कुरा ल्याइदिएको भए भनिदियो भइहाल्यिो नि !
दाना – (चौलाको कपाल मिलाउँदै) त्यै मासुको कुरा त हो नि ! ल्याइदिएको छु । त्यो झोलामा छ, निकाल त ।
अमाङ्ग – (भान्साबाट) ल ल हुन्छ, हवस् ।
चौला – अनि …
दाना – अनि … ए ए ए, त्यो पनि ल्याइदिएको छु । (लौ निकालेर चक्लेट दिन्छन् ।)
दाना – अमाङ्ग सुन त अमाङ्ग …
दाना झसङ्ग हुन्छन् । उनी अतीतबाट यथार्थमा फर्किन्छन् । कठोर यथार्थ, पीडादायी ययार्थ आफ्नो वरिपरि घेरिएर बसेको देखेपछि उनी लामो सासका साथ खुइय गर्छन् ।
समय : बेलुकीपख ।
स्थान : सडकछेउ ।
पात्र : दाना, चौला र अन्य
तातो सडकमा श्रीमतीको लास बोकेर दाना थकित छन् । चौला पनि थकित छन् । उनीहरू करिब १२ किलोमिटर वर आइपुगेका छन् । दाना श्रमतीको लासलाई सडकको एक छेउमा राख्छन् । छोरी चौला पनि नजिकै आएर टुसुक्क बस्छिन् । आमाको लास देखेर छोरी चौलालाई आमाले गरेको मायाको स्मरण हुन्छ । उनमा आमाको मायालु व्यवहारको झलझली याद आउँछ । आमाको महत्व र आवश्यकताले चौलालाई निकै चिमोट्छ । चौला एकछिन् टोलाउँदै अतीततिर पुग्छिन् ।
एम्बुलेन्सको टींटीं आवाजले चौला झल्याँस्स हुन्छिन् । उनीहरूका अगाडि एम्बुलेन्स आइपुगिसकेको छ । त्यहाँ केही गाउँका युवाहरू पनि आएका हुन्छन् ।
चालक – जाऔँ । हामी कालहाँडीबाट आएका हाँै ।
त्यहाँ आएका युवाहरूको सहयोगमा दाना श्रीमतीको लसलाई मोटरमा राख्छन् । चौला पनि मोटर चढ्छिन् । मोटर अगाडि हुँकिन्छ । मोटर हुँकिएको सानो आवाज आइरहन्छ ।
नेपथ्यबाट चर्चित प्रगतिवादी कवि निभा शाहको ‘मनसरा’ को कवितात्मक स्वर आइरहेको हुन्छ ।
दुनियाँ बदलिने भए
उहिल्यै बदलिसक्थ्यो मनसरा ।
जब कि मनसरा !
रगत पसिनाले नै
दुनियाँ बदलिने हो
किन बदलिएन ?
सुन्यौ मनसरा ?
आगो बोलिरहेछ मनसरा ।
आफूले चिरेका दाउरा
अरूले नै बालेपछि
आगो आफ्नो हुँदैन मनसरा
आगो आफ्नो नहुनेको
उज्यालो आफ्नो हुँदैन मनसरा
उज्यालो आफ्नो नहुनेको
दुनियाँ बदलिँदैन मनसरा
आफूले खोरिया खनेको खेत
अरूकै नाममा दर्ता भएपछि
माटो आफ्नो हुँदैन मनसरा
माटो आफ्नो नहुनेको
पेटभरि अन्न हुँदैन मनसरा
पेटभरि अन्न नहुनेको
आफूले बोकेको बन्दुक
अरूले नै कासन गरेपछि
सत्ता आफ्नो हुँदैन मनसरा
सत्ता आफ्नो नहुनेको
आगो बोलिरहेछ मनसरा
आगोको आवाज सुन मनसरा ।।
जब जनता राज्यबाट उपेक्षित हुन्छ, त्यसपछि विद्रोहको जन्म हुन्छ । आज टेलिभिजन तथा सोसल मिडियामा भारतले भू उपग्रह उडायो, नयाँ नयाँ खोज आविष्कार गरयो भन्दै विकासको राग अलापिरहेको छ । भारतीय नेताहरूमा छिमेकी देशहरूमा आफ्ना राजदुतहरूमार्फत विकासे खैरात बाँडेर आफ्नो देश सम्पन्न भएको परिचय दिने होड गरिहेका छन् तर आफ्नै देशका असङ्ख्य आदिवासी नागरिकहरूको श्रीमती उपचारमा मृत्यु अँगाल्न वाध्य छन् । तिनीहरू विकासको खोक्रो नारा अलापेर आफू सम्पन्न भएको ढोंग गरिरहेका छन् तर त्यही देशमा दानाहरू आफ्नी मृत्यु भएकी श्रीमतीको लासलाई काँधमा बोकेर १२|१२ किलोमिटर हिंड्न विवश छन् । आखिर किन ? जसको रगत–पसिनामा राज्य, राज्यको प्रतिष्ठा र सभ्यता उठ्यो, तिनै जनताको रगत, पसिना र जीवनको अवमूल्यन कहिलेसम्म ? आज दाना र दानाहरूको राज्य कहाँ छ ? यो संसारभरका दानाहरूको विद्रोह हो कि होइन ? आखिर दानाहरूलाई विद्रोही बनाउने को हो ? को हो ??
(स्रोत : रचनाकार स्वयंले ‘नयाँ रचना पठाउनुहोस्‘ बाट पठाईएको । )
This entry was posted in नाटक and tagged Khem Thapaliya, Natak. Bookmark the permalink.